မျက်ကန်းမျိုးချစ် or Ultranationalists | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကိုယ်ကျိုးရှာ စီးပွားရေးသမားများ၏ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက် တိုင်းပြည်မီးလောင်တိုက်သွင်းမှု့
TQ my good Bama friends for understanding »
FB of Ko Zaw Zaw ဘင်္ဂါလီ အရေး … ခုိုးဝင်လာသူများ အရေး … တုိုင်းပြည်အတွင်း မှာ ဆုညံ ပွက်လော ရုိုက်အောင် ဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာ ထဲမှ .. အရေးကြီးဆုံး အပုိုင်းကုို တင်ပြဆွေးနွေး ရေးသားမှု များ မတွေ့ရသေးပါ .. ကုိုယ့်တုိုင်းပြည်ထဲ ကို နုိုင်ငံခြားသားများ ခုိုးဝင်ဖို့ ဆုိုသည် မှာ အမှန်တကယ် လွယ် ကူသည့်ကိတ်စ မဟုတ်ပါ .. တုိုင်းပြည်အုတ်ချုပ် မင်းလုပ်နေသည့် စစ်အစိုးရ ၏ ဆုိုးမွေ ဟုသာ ပြောရတော့မည် .. သူအာဏာတည်မြဲရေး အတွက် .. ဝန်ထမ်းများကုို လာဘ်စားချင်းတုိုင်းစား .. လုပ်ချင်တုိုင်း လုပ်ခွင့် ပေးထားကာ တုိုင်းပြည်ကုို ပျက်ယွင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်များ ၏ အသီးအပွင့်များ (တနည်း .. ဆုိုးမွေများ) ဖြစ်သည် .. ဒါကုို … ထင်ယောင်ထင်မှား နှင့် တောင်ဆဲ မြောက်ဆဲ လျှောက် ဆဲနေကြသည် … ဆဲနေရုံ နှင့် မပြီးပါ .. ဘာမှလည်း ဖြစ်မလာပါ .. ကျနော်တုို့ ပြည်သူ အချင်းချင်းသာ သွေးကွဲ .. အမုန်းများ ပီး .. စုစည်းမှု မရှိ ဖြစ်ကာ .. တုိုင်းပြည်တုိုးတက် ချမ်းသာရေး .. ဒီမုိုကရေစီ အရေး ဝေးနေရုံသာ ရှိနေတော့မည် .. ထုိုပုံစံ သည် ပင်လျှင် … အနှီ အစုိုးရ ၏ အကြိုက် ဖြစ်နေပါသည် .. ဆင်ခြင်ကြပါကုန် ဟု တုိုက်တွန်း ချင်ပါသည် …
FB of Ko Zaw Min Tun ရွှေအိုင်ဒီယာများ
စာအုပ်ထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပြန်အိပ်မက်ဖို့ ပန်းဦးဆက် ဓလေ့ကို ဖော်ထုတ်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး ဆရာမကြီး တအုပ် ဘယ်သူတွေ သတို့သမီး လုပ်မလဲ?
The Sino-Tibetan languages areafamily of some 250 languages of East Asia, Southeast Asia and parts of South Asia, including the Chinese and Tibeto-Burman languages. They are second only to the Indo-European languages in terms of the number of native speakers. The internal classification of the family is debated. Read all in Wikipedia
Brāhmī is the modern name given to the oldest script used in India, during the final centuries BCE and the early centuries CE. Like its contemporary in what is now Afghanistan and Pakistan, Kharoṣṭhī, Brāhmī was an abugida.
The Gupta script of the 5th century is sometimes called “Late Brahmi”. From the 6th century onward, the Brahmi script diversified into numerous local variants, grouped as the Brahmic family of scripts.
Tags: Aung San Suu Kyi, Brāhmī script, Burma, Cantonese, Chinese, Chinese language, Muslim, Myanmar, Rohingya people, Sino-Tibetan languages
This entry was posted on April 30, 2012 at 9:53 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မျက်ကန်းမျိုးချစ် or Ultranationalists”
May 4, 2012 at 9:44 am | Reply
ပြောတော့ NGO ..ဒီမို..လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှား​သူ..သာသနာစောင့်ရှောက်
တကယ်တန်းကျတော့..ရွံစရာကောင်းတဲ့​ Racists တွေပဲ…
အဲ့ဒီ Racist တွေထဲမှာ အလွှာပေါင်းစုံကလူပေါင်းစုံပါနေ
ကိုယ့်မိဘ အဖိုးအဖွား ဘေးဘီတွေရဲ့အမည်တောင်သေ
ဘမသိ မိုက်ရိုင်းရရင်ပြီးရော ၀င်ဆဲနေကြတယ်။
စွတ်စွဲချက်တွေ ထင်ရာမြင်ရာတွေ အိုးနင်းခွက်နင်းနဲ့ အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါသည်​ လို့အသံကောင်းဟစ်ပြပြီး နောက်လိုက်စုမယ်-ငွေရှာမယ်
နာမည်ကြီးအောင်လုပ်မယ်။ အစိုးရကလဲ မတည်မငြိမ်
အတိုက်အခံတွေက မပြောရဲဘူး လက်ရှောင်နေတယ်။
မစဉ်းစားဘဲ အရေမရ အဖတ်မရတွေဖင်ပိတ်အော်နေကြ